ubusazi ukuba irekhodi lehlabathi lokuthayipha ii-sms ezikhawulezayo lingaphezulu kwesiqingatha ukusukela ngo-2006?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba irekhodi lehlabathi elikhawulezayo lokuchwetheza ngaphezulu kwesiqingatha ukusukela ngo-2006?
Ngaba uyazi ukuba irekhodi lehlabathi elikhawulezayo lokuchwetheza ngaphezulu kwesiqingatha ukusukela ngo-2006?
Usuku nguNovemba 12, 2006. I-SingTel, enye ye-Singapore kunye ne-apos; s abathwali ngaphandle kwamacingo, ibamba umceli mngeni we-SMS Shootout, apho abathathi-nxaxheba kufuneka batayiphe umyalezo onamagama angama-160, umyalezo wamagama angama-26 ngokukhawuleza. U-Ang Chuang Yang oneminyaka eli-16 uphakathi kwabagqatswa abangama-300, kwaye akathandi ukuphumelela ibhaso lendawo yokuqala, kunye ne- $ 25 000 ezinkozo kunye namabhaso. Uyayichitha irekhodi lexesha elinemizuzwana engama-41.52, ngaloo ndlela ebetha irekhodi ebelisethwe ngaphambili kulo nyaka ngemizuzwana eyi-0.7.
'Iipiranhas ezinamazinyo ezitshixwayo zesigaba seSerrasalmus kunye nePygocentrus zezona ntlanzi zamanzi zinoburhalarhume ehlabathini. Ngokwenyani, abafane bahlasele umntu '- le yi-Guinness World Records SMS esemthethweni, ekufuneka ayifakile kwifowuni yakhe encinci yeelekese.
Irekhodi le-Yang, ngaphandle kwamathandabuzo, linomtsalane. Nanamhlanje, uninzi lwethu luya kusokola ukuchwetheza itekisi efanayo kulo naluphi na uhlobo lwefowuni kwisithuba esingaphantsi komzuzu. Kodwa inyani kukuba ukusukela ngo-2006, irekhodi lehlabathi lokuchwetheza ngokukhawuleza kwifowuni linombulelo ongaphezulu kwesiqingatha ngokuza kwezikrini zokuchukumisa, ukubikezela amagama, kunye nobunye ubuchwephesha bebhodi yezitshixo.
I-Fleksy -yinto eyaziwayo, iklabhu yesithathu eskrinini ngo-2010, uFranklin Page wathabatha nje ama-35.54 ukufaka eli binzana likhankanyiweyo kwifowuni yesikrini- i-Samsung Omnia II. Kodwa khange asebenzise ikhibhodi esemgangathweni eskrinini. Iphepha lisebenzise uSwype endaweni yoko, kwaye mhlawumbi inyani yokuba wayenomsebenzi eSwype wamnceda ukuba abeke irekhodi elitsha. Kwimeko apho & ampos ungayazi iSwype, ivumela umntu ukuba angene ngamagama ngokuswayipha iileta, esusa isidingo sokuphakamisa umnwe.
Ngaba ufuna ukwazi ukuba irekhodi lakhe ligcinwe ixesha elingakanani? Iinyanga nje ezimbalwa. Emva kwexesha ngo-2010, uMelissa Thompson oneminyaka engama-27 ubudala ungene kwimizuzwana engama-25.94 ebulela uSwype kwi-Samsung Galaxy S. yakhe kwakhona, kuye kwafuneka ukuba achwetheze kwa-Guinness World Records ibinzana elikhankanywe ngasentla.
Ukuza kuthi ga ngoku ngo-2014, irekhodi lokuchwetheza ngokukhawuleza kweSMS laphulwe kabini, kwaye ikhibhodi efana neSwype yayisetyenziswa kuwo omabini la mathuba. UGaurav Sharma usebenzise iWindows Phone 8.1 kunye neapos; s Word Flow keyboard ukuseta irekhodi lemizuzwana eyi-18.44. Ke ngoMeyi, uMarcel Fernandes oneminyaka eli-16 ubudala waphumelela ixesha lemizuzwana eyi-18.19 kuphela ngelixa wayejongwa ngabameli baseGuinness. Wakwazi ukufaka abalinganiswa abali-160 kwi-Samsung Galaxy S4 ngoncedo lwebhodi yezitshixo yeFleksy.
Ukhawuleza kangakanani ukuthayipha umyalezo osemthethweni weGuinness World Records kwifowuni yakho? Sazise ezantsi kwizimvo!
izikhombisi: IRejista , Itekhnoloji , Iindaba zeSky , Uphando lweMicrosoft , Iirekhodi zehlabathi zeGuinness
pixel 3 yintoni esebhokisini
ikhadi lebhanki elingenamakhadi laseMelika
boto3 yokukhuphela ifayile kwi-s3
Ngaba iAmazon kunye noGoogle bakhuthaza uphononongo olungelulo?
I-T-Mobile ekhupha uhlaziyo lwePie 9 kwi-Samsung Galaxy S9 / S9 +
I-Apple Watch Series 5 yenza isivumelwano: fumana isaphulelo se- $ 150 kuhlobo lwe-Apple Watch Series 5 yeNike
I-Verizon ngoku ikhupha i-Android 6.0.1 Marshmallow ye-Galaxy S6 kunye ne-S6
I-Verizon, T-Mobile kunye ne-AT & T icwangcisa ukuphelisa izibonelelo zabo ze-coronavirus ngoJuni 30
I-Apple Watch 7 specs kunye neempawu ezicociweyo: umboniso omtsha kunye neprosesa, akukho liso eswekile yegazi
I-Apple iPhone 6 vs Sony Xperia Z3 Icwecwe
I-7 yeyona midlalo yeqonga yabadlali abaninzi ye-iOS kunye ne-Android
Umhla wokukhutshwa kukaGoogle Pixel Fold, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Ezona ndlela zilungileyo zokuvavanya okuqhubekayo kwi-Agile